Sheekada Filimka Mom: Waa Filim Qiiro Badan Sridevi, Akshaye Iyo Nawaz Ku Xiiso Galin Doonaan | Filimside –	Monday, July 24th, 2017	" alt="Filimside - logo" border="0" />
Sheekada Filimka Mom: Waa Filim Qiiro Badan Sridevi, Akshaye Iyo Nawaz Ku Xiiso Galin Doonaan
Jul 8, 2017 - 5 Jawaabood	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: July 8, 2017:
Waxaa tiyaatarada la saaray filimka Mom oo ah mid ka hadlaayo fariin waaqici ah sidoo kalena siweyn loo wada sugaayay madaama ay hogaamiye ka tahay atirishada la wada jecel yahay Sridevi.
Jilaayaasha filimka Mom: Sridevi, Akshaye Khanna, Adnan Siddiqui, Sajal Ali, Nawazuddin Siddiqui
Muxuu Ku Wanaagsan Mom: Qaabka sheekada loo qoray, qaabka isku xirka loogu sameeyay iyo wajiga loo sameeyay Nawazuddin Siddiqui
Muxuu Ku Xun Yahay Filimka Mom: Inaba caadi ma ahan bandhiga Sridevi sameesay laakiin waxaa haboon inay hormariso lah jada ay adeegsaneyso ama hadalkeeda filimkaan, sidoo kalena waxaa aad u wanaagsaneyd in filimkaan qaybtiisa dambe waqti ahaan lasoo yareeyo.
Daawo Ama Ha Daawanin Mom: waa filim halka saac oo hore aan marnaba indha laga qaadi karin, sidoo kalena halka saac dambe barkiisa xiisaha sare usii kacaayo, sidaa darteed Mom waa filim qasab ah in qof walbo ka war doono fariintiisa.
Sheekada Filimka Mom Muhiimada Ay Leedahay: Jaceylka hooyada ay caruurteeda u qabto ma jirto wax lala bar bar dhigo, sidaa darteed hooyo walbo nafteeda inay u hurto ayay diyaar u tahay si ay sharafka reerkeeda iyo caruurteeda u difaacdo.
Devaki (Sridevi) waa hooyo qalbi jilcan marwalbana hadal wanaagsan ku hadasho sidoo kalena jecel inay seygeeda Adnan Siddiqui farxad dheeraad ahna siiso.
Devaki (Sridevi) waxay aad isku jecel yihiin soona bar baarisay gabadha ay eedada u tahay ama seygeeda dhalay Arya (Sajal Ali) waxaana ka dhaxeeyo xiriir adag weliba Arya (Sajal Ali) kaliya waxay aaminsan tahay in Devaki hooyadeed tahay.
Laakiin filimka wuxuu xiiso gaar ah yeelanaa marka ay iska hor imaadaan Arya (Sajal Ali) iyo hooyadeed Devaki arin ku aadan maamulka iyo masuuliyada reerka.
Habeen habeenada ka mid ah Arya (Sajal Ali) waxay ka qayb galeysaa xaflad lagu caweeyo ayada iyo asxaaabteeda, balse nasiib xumo gabadhii yareed kufsi aad u daran waxaa u geesanayaan koox gangsters ah waxayna kaga tagayaan heer dhimasho ku dhow.
Devaki (Sridevi) waxay go’aan ku gaareen inay cadaalada horgeyso kuwii gabadheeda Arya (Sajal Ali), dhibaatada xanuunka badan u geesteen waxaana dhaceyso in tuugadii xabsiga laga sii deynayo sidoo kalena lagu tilmaamayo inaysan wax dambi ah galin.
Devaki (Sridevi) waxay go’aan ku gaareen inay ka aar gudato cashar xanuun badana u dhigto kuwii gabadheeda Arya (Sajal Ali) dhibaatada aan laga kaban karin u geesteen.
Hadaba Devaki (Sridevi) inta ay aar gudashadeeda ku guda jirto waxay la kulmeysaa caqabado kala duwan mida kowaad waxay tahay askariga mayalka adag Akshaye Khanna inuu kaga digaayo wax qalad ah inaysan galin ama sharciga garab marin hadii kale dhibaato xoogan la kulmi doonto.
Sidoo kalena Nawazuddin Siddiqui isagana waa dambi bare caqabad ku ah Devaki (Sridevi) inaysan xaqiiqada iyo waxa jiro ogaanin sidoo kalena xog walbo ay heli rabto hooyadeed ka hor istaagayo.
Hadaba Devaki (Sridevi) ma aar gudan doontaa sidoo kalena askariga mayalka adag Akshaye Khanna ma garab istaagi doonaa hooyadaan booliska garabka ka weesay sidoo kalena Nawazuddin Siddiqui muxuu damacsan yahay isagana?
Maxaa Laga Dhahay Sheekada Filimka Mom: Director Ravi Udyawar wuxuu doortay fariin qiiro badan oo xasaasi ah wuuna u cadaalad falay qaabka uu isku xirka quruxda badan ugu sameeyay.
Ravi Udyawar uma eko shaqsi filimkiisa kowaad Mom yahay wuxuuna la yimid filim dhiiri galin u noqon karo hooyo kasto sidoo kalena filim sameeyahan abaal marino kala duwan ayuu sheekada Mom ku heli doonaa.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Mom: Sridevi markale waxay muujisay inay tahay atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka ee door walbo sameyn karto waxaa qasab ah inay Hindiya ku faanaan heesashada Sridevi oo shaashada awood ku leh xili walbo.
Sridevi garbaheeda ayay filimka Mom ku qaaday waxayna u jishay si qurux badan waayo bandhigeeda oo heer sare ah iyo qaabka fariinta loo dhigay oo wacan awgeed Mom wuxuu sababi doonaa in xidigtaan goobaha abaal marinada lagu bixin doono sanad dambe in badan loogu yeeri doono.
Nawazuddin Siddiqui marnaba haka sugin filim uu kasoo muuqday inuu ku niyad jebiyo xitaa hadii muuqaalkiisa yar yahay! Inaba caadi ma ahan sida uu doorkiisa Mom jilaagaan isugu ekeysiiyay.
Bollywood-ka xiligaan hadii uu jiro jilaa Nawazuddin Siddiqui la tartami karo waa isla Nawaz, micnaha ma jiro xirfadle kale oo Nawaz la tartami karo sida door walbo looga run sheegi karo, runtii ninkaan waa talaabsaday dhan walbo.
Akshaye Khanna wuu soo laabtay sidoo kalena si qurux badan ayuu u matalay doorkiisa askariga mayalka adag ee filimka Mom.
Maxaa diiday in Akshaye Khanna filimo badan sameeyo hadiiba uu sidaan saameyn xoogan shaashada ugu yeelan karo!
Fadlan Akshaye Khanna dadaal kaaga sii laba laab waxaa tahay atoore karti badan oo door kasto kasoo dhalaali karo.
Jilaayaasha reer Pakistan ee filimka Mom kasoo muuqdeen Adnan Siddiqui iyo Sajal Ali bandhig wacan ayay la imaadeen waxaa la moodaa inay waligood sameyn jireen filimada Bollywood-ka.
Gunaanad: Mom waa filim jilaa kasto bandhig qurux badan ka muujiyay midaasna waxaa ku amaanan Director Ravi Udyawar, laakiin Nawazuddin Siddiqui ayaa xaday show-ga filimkan madaama doorka ugu hadal heynta badan isaga la siiyay.
Mom waa filim qiiro badan oo xambaarsan fariin wacyi galin ah weliba doorka Sridevi waa mid dhaxal gal ah sidoo kalena daawadayaasha ku qasbi doono inay tiyaatarada soo aadaan.
Filim walbo oo sheekadiisa wanaagsan tahay dadkiisa isaga ayaa soo jiidan karo sidaa darteed Mom u badi inuu mudo dheer tiyaatarada saarnaado daawadayaal ku filana soo jiito.
Kooxda filimada ka faaloodaan cel celis ahaan waxay sheekada Mom siiyeen 3.5/5 taasi oo ka dhigan in sheekadiisa aad u wanaagsan tahay.
Waxaa Aqriyay: 754
Yacquub tiger says:	July 8, 2017 at 10:47 am	Axyaa Film Mom Best Film 100%
Runtii was film sheeko wanagsan Leh
Nawazudin Waa jilaa Cajiiba Oo Runtii layaab leh doorwalba Semeyn Kara
Ahmed sheelare says:	July 8, 2017 at 1:50 pm	welcome back highly writer Zakarie Abdi
we miss you ✌
miss qalanjo says:	July 8, 2017 at 2:14 pm	Ar zakariya ahaa nin la waayay
samiir khadar says:	July 8, 2017 at 2:48 pm	Zap zakariye waxan ku waydinayaa
zxp ninka layiraahdo SAMEER eeLYRIC AMA HAL-ABUUR oon n ku arkay filomo badan INAAD TAARIKHTIISA NOO SOO BAADHAN
Taageere deepuu says:	July 8, 2017 at 7:29 pm	Fadlan zakarie qoraaladaada waa jecelnahaye markasta isku xirkaaga caadi ma.aaha ee aduu lee nok shaqee